Samsung Galaxy Note 7 ga-enwe ihu ihuenyo na-enweghị ụdị ewepụghị | Gam akporosis
Samsung Galaxy Note 7 ga-abịa na otu mbipụta na curved ihuenyo
Samsung na-anwale ya na mbipụta S na Rịba ama ma ọ bụrụ na mbipụta ihu bụ n'ezie nabatara zuru ezu nke mere na n'ime otu n'ime ndị a ọ ga-ewepụta ọnụ ya na ihuenyo ahụ pụrụ iche. Ọ chọghị igwu ya site na mbido wee mara otu esi egwu kaadị ya iji nwee nsụgharị abụọ, otu nwere ihuenyo gbagọrọ agbagọ ma nke ọzọ nwere ọkwa dị mma karịa.
Ma e nwere asịrị na-amụba ọdịdị banyere ohere nke Galaxy Note 7 nwere curved ihuenyo na-ekpe n'agbanyeghị ụzọ mbipụta kachasị na anyị niile maara na 99% nke smartphones na ahịa. Nke a pụtara na, ọ bụrụ na ị kpọọ nke ọma na Ndetu 7, anyị nwere ike ịhụ Galaxy S8, nke anyi nwere rumo ugbua, nwere mbipụta dị n'ọnụ ma chefuokwa ihuenyo ọzọ dị elu ruo mgbe ebighi ebi.
Nkwupụta ahụ na-ekwusi ike na Samsung anaghị atụle ohere nke ẹkedori a ewepụghị version nke smartphone, ya mere ọ na-akụ ihe niile na ihuenyo ahụ na-adọta mmasị dị ukwuu na nke ndị obodo gam akporo nabatara n'ihu ọha. Ọ bụ ezie na ọ nwere nkwarụ ya, dị ka enweghị omenala iji nwee akụkụ ihu igwe na ekwentị, nke bụ eziokwu bụ na oge ọ bụla ngwaọrụ nwere ihu n'ihu anyị, anyị na-elekwasị anya na ya. Nke a dị ọcha, ahịa siri ike.
Dị ka ọ dị na asịrị a na-akpọ asịrị, anyị ga-ahapụ ohere a ka anyị jide mgbe anyị na-eche ka ọnyà ndị ọzọ bịarute n'izu ndị na-abịanụ nke na-akwado na anyị ga-ahụ naanị nsụgharị nke Galaxy Note 7 na ahịa Okwesiri ighota na, oburu na mgbanwe nke imewe bu ihe aturu anya na Galaxy S8, ihe di nma na ngwa di elu kwa afo abuo, imeputa otu onu ogugu ga-azoputa Samsung site na ichekwa ihe okike ohuru. Nke ahụ kwuru, ọ tinyekwara ego nke ya n'ịwepụta mbipụta abụọ dị iche iche na ndị ahụ Note na Galaxy S.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Samsung Galaxy Note 7 ga-abịa na otu mbipụta na curved ihuenyo
Enwere m S7 ihu, ma m ka usoro a dị oke nkpoda. Ọ bụ ihe ịchọ mma na mbụ mana ọ baghị uru ma ọ dị mfe imetụ ọnụ na ọ na-esiwanye ike ide ma ọ bụ imetụ ihe ndị dị n'akụkụ aka. Gba ihe niile na otu nha anya abụghị ezigbo echiche.
Ee nke ahụ bụ otu ọ dị. Ọ bụ ekwentị mmadụ ga-eme ya, mana n'akụkụ ịchọ mma ọ na-adọrọ adọrọ.
Ihe isii ị kwesịrị ịma gbasara Minecraft Realms